Boliiska oo aan baari doonin dembiyada sheekooyinka been abuurka qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Patrik Engström, madaxa ciidanka xuduudaha iyo shakhsi kombiyuutar hor fadhiya.. sawir: Jonas Ekströmer/TT samt Emelie Rosén/Sveriges Radio.
Boliiska oo aan baari doonin dembiyada sheekooyinka been abuurka qaxootiga
Suurtagal ma ahan in muhiimadda la saaro falalka noocan ah
La cusbooneeyay onsdag 13 december 2017 kl 10.04
La daabacay onsdag 13 december 2017 kl 08.07
Inkasta oo ciidanka ammaanku la socdaan falalka dembiyada ee sheekooyinka been abuurka ee qaxootiga laga iibiyo ayaanu haddana ku talo jirin inuu ka hor tag ku sameeyo falalkaa, sida uu sheegay madaxa laanta ciidanka xuduudaha.
–Mararka qaarkood waxey ku saabsan tahay sheekooyin been abuur ah, mararka qaarkoodna dokumentiyo laga been abuurey. Waa arrimmo ku saabsan ka ganacsi war-bixin iyo sidii ogolaansho deggenaansho looga heli lahaa waddan, sida uu sheegay Patrik Engström.
Waa shaashado ku shaqeeysta sidii ey qaxootiga uga iibin lahaayeen sheekooyin la dhoodhoobey oo ey isku dhiibaan, sida ay laanta wararka Ekot ay baaris ku ogaatay. Shaashadahan ayaa si furan xayeeysiin ugu sameeya falalkooda iyo sida ey shakhsiga uga caawin karaan sidii uu ogolaansho deggenaansho uga heli lahaa dalka Sweden, xitaa haddii aaney jirin xaalado lagu siin karo.
Waa howlo sharci-darro ah, sida ey xeer-yaqaanno u caddeeyeen Ekot. Hase yeeshee aanu ciidanka ammaanku ku talo jirin sidii uu baaris ugu sameeyn lahaa.
–Maya, waxaan oran karaa in aanan ku howlaneyn. Lama socdo baaris noocan ah oo dalkan ka socota, sidoo kale muddadii aan ka howl-galayey hayadda Europol ma sheegi karo baaritaanno noocaas ah oo ka socday, sida uu sheegay madaxa laanta ciidanka xudduudaha Patrik Engström.
Laanta wararka Ekot oo xiriir la sameeysay dhammaan laamaha ciidanka ammaanka ee gobollada waxey sidoo kale ka bixiyeen sawir midkaa la mid ah. Ma jirto cid ka war haysa meel ay ka socoto baaris noocaasi ah.
Waxaan sidoo kale aan war laga heyn baaxadda iyo inta shakhsi ee sheekooyinka been-abuurka ah ku heshay sharci deggenaansho.
Halka ey dhanka kale wakaaladda socdaalka iyo ciidanka ammaankuba aamin-san yihiin iney falalka noocani yihiin kuwo halis ah, maadaama ey wax-yeeleeyn karaan kalsoonida nidaamka socdaalka.
Sidaasi oo ay tahay ayuu Patrik Engström aamin-san yahay inay aanay wanaag-sanaan lahayn inuu ciidanka ammaanku uu muhiimadda saaro baarista dembiyada noocani ah.
–Ciqaabta dembiyada noocaasi ah waa mid aad u hooseeysa Sweden. Halka dhanka kale ay ciidanka ka qaadan lahayd quwad ballaaran ee baaris loogu sameeyo. Sidaa daraadeed dani uguma jirto ciidanka ammaanka quwadda dhaqaale ee kaga baxaya sidii loo maareeyn lahaa falalkaa.
Hase yeeshee ay laanta wararka idaacadda ee Ekot ku guuleeysatay sidii ay ku caddeeyn lahayd ninka ka dambeeya shaashadda sheekooyinka been abuurka laga iibiyo qaxootiga iyo inuu yahay muwaadin iswiidhish ah.
Ma aamin-san tahay inay falkani yahay mid loo baahan yahay inuu ciidanka ammaanku baaris ku sameeyo?
–Waxaan oran lahaa sidan: Ciidanka ammaanka Sweden waxaa hor yaala xaalado ay ku adag tahay sidii ey uga gun gaari lahaayeen howlaha muhiimadda la saarey. Marka xitaa haddii aan jeclaan laheyn in aanu baarno suurtagal maahan in muhiimadda la siiyo, sida uu sheegay Patrik Engström, madaxa laanta ciidanka xuduudaha Sweden.